မေတ္တာသည်ဒုက္ခထဲကထွက်သင့်အ Keep နိုင်ပုံ?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: Sep. 09 2019 |2မိဖတ်ပြီးသား
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌လဲကျမှာကိုအတွေ့အကြုံလူတိုင်းအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်သူ / သူမ၏အသက်တာတွင်ရှိသင့်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်. ကောင်းသောအရာတစုံတခုဤအံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့လုံလောက်တဲ့အခွင့်ထူးခံမဟုတ်သောလူအနည်းငယ်ကသာရှိပါတယ်တဲ့.
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ဖြစ်ခြင်း၏ခရီးကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုအရအာဟာရဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, တစ်ဦးမေတ္တာကိုဘဝရှိခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်စေများစွာသောအခြားအချက်များစွာရှိပါတယ်. ချစ်ခြင်းမေတ္တာကယ့်ဒုက္ခထဲကသင်တို့ကိုငါစောင့်နိုင်; ဘယ်လိုသိမှအပေါ်ကိုဖတ်ရှု.
အဘယ်အရာကိုဟောင်းနွမ်းရှာဖွေနေထက်ပိုကြီးတဲ့ဒုက္ခနိုင်ပါတယ်? မေတ္တာကိုအချိန်မတန်မီအိုမင်းကျဘမ်းဆီးလုယက်ခြင်းမှသင့်ကိုရပ်တန့်နိုင်. သင် oxytocin နှင့် ပတ်သက်. သိပါနဲ့ (ရိုမန်တစ်ဝါဒီမေတ္တာကိုဟော်မုန်းအဖြစ်ကရည်ညွှန်း)? အတွက်ရလဒ်တွေအောင် Love တိုးမြှင့်လာသည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် oxytocin အဆင့်ကိုအတွက်. oxytocin DHEA ထုတ်လုပ်မှု triggers, ၎င်း၏ဆန့်ကျင်အိုမင်းအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်း.
သင်ကသင့်အရေပြားကိုလိင်ပြီးနောက် glows ဘယ်လိုမမြင်မိပါဘူး? သင်ပြီးနောက်နံနက်မည်သို့ခံစားရတက်ကြွသတိထားမိမှာမထားပါနဲ့? ဤသူအပေါင်းတို့သည်ကြောင့် DHEA ၏ဆန့်ကျင်အိုမင်းအကျိုးခံစားခွင့်ဖြစ်ကြ၏.
သုညသို့မဟုတ်နိမ့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုတစ်ခုသာအရာတစုံတခုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်, တစ်ဦးပူပန်ဘဝ. ဒါဟာညာဘက်အလုပ်ဆိုတော့ထံမှသင်တို့ကိုရပ်တန့်နိုင်; ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိုအပ်၏ခေတ်၌ကြားသိအောင်ထံမှသင်တို့တားဆီးနိုင်သည်, နောက်ဆုံးမှာတော့ဖြစ်သင့်အားအဘယ်သို့သောထိုက်တာထက်အပြောင် entity ကိုဆက်လက်တည်ရှိရန်သင့်အားအတင်းအကျပ်.
ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့အကောင်းဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုမှာယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစေဖို့အတွက် Boot ဖြစ်ပါသည်. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူရင်ခုန်စရာကြားဆက်ဆံရေးမျှဝေသောအခါများသောပုဂ္ဂိုလ်သင် Superman / superwoman တူခံစားစေတယ်. ဟုတ်ကဲ့, သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်အချို့ကိစ္စများကိုဘို့သင့်ကိုဝေဖန်စေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်ခြုံငုံသင်အမြဲသူ / သူမအတွက်အကောင်းဆုံးကိုဆက်လက်တည်ရှိ. ဒါဟာသင့်ကိုအလိုအလျောက် instate Self-ယုံကြည်ချက်ကိုမည်သင်ကပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချလူတစ်ယောက်ပါစေ; သင်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတဲ့အခါနဲ့သင့်ရဲ့ပြဿနာတွေကို၏ထက်ဝက်ကိုဖြေရှင်းနိုင်ကြသည်.
မေတ္တာသည်မူးယစ်ဆေး မှစ. သင်တို့အားပယ်ရှားစောင့်ရှောက်နိုင်
ချစ်ခြင်းထက်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ကာကွယ်အတိုင်းအတာသို့မဟုတ်ကိုးကွယ်ရာမရှိစေနိုင်တယ်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြည်သူ့နက်ရ​​ှိုင်းစွာဥစ္စာများအလွဲသုံးစားမှု၏ကြီးထွားလာမှုနှုန်းကြောင့်နှောင့်ရှက်ကြသည်; မေတ္တာကိုဤပြဿနာကိုရန်အကောင်းဆုံးအဖြေဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးမှုနှင့်အလွန်အကျွံသောက်တူအလေ့အကျင့်အများအားဖြင့်စိတ်ကျဝေဒနာ၏ဘေးထွက်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်. ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်စုံတစ်ဦးသည်မင်္ဂလာမင်္ဂလာဆောင်မစောင့်နိုင် ပင်လယ်အော်မှာစိတ်ကျရောဂါ ဤသို့ဖြင့်သိသိသာသာမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှုလျှော့ချ၏တစ်ဦး၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုကိုလျှော့ချနိုင်.
မေတ္တာသည် STDs ကိုကာကွယ်တားဆီး
သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးချစ်မိတဲ့အခါ, သင်တို့သည်မသာသူ / သူမ၏သင်အပေါ်သစ္စာဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်, ဒါပေမယ့်လည်းအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကျောအောနေတယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲကိုရှောင်ကြဉ်လေ့ရှိကြသည်. ပိုပြောသွားတာကထားရန်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌လူအပေါ်သစ္စာနေဖို့ကွာအပိုအားထုတ်မှုချပြီးမှဝန်မပါဘူးသူတို့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတစ်ဦးထိခိုက်နာကျင်ချင်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကအဓိကအားဖြင့်ဖွင်. ဒါပေမဲ့, မည်သို့ STD ကာကွယ်တားဆီးရေးနဲ့ဆက်စပ်နိုင်လာ?
တော်တော်ခိုင်မာ link ကိုရှိတယ်.
သစ္စာရှိမှုတို့ကြောင့်အတူ၎င်းတို့၏ tryst မေတ္တာရှိလူများအများအားဖြင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းမျိုးစုံလိင်မိတ်ဖက်ရှိခြင်းမရှိကြနှင့်ဤအလှည့်တွင် STDs ဖွံ့ဖြိုးဆဲသူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမှုကိုလျော့နည်းစေ. ဟုတ်ကဲ့, ထိုသို့ကဲ့သို့ရိုးရှင်းင်.
ဤရွေ့ကားကိုဒုက္ခမေတ္တာကိုအချို့ထံမှသင်တို့အကာအကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြသည်. သင်သည် သာ. ချစ်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုသိလိုလျှင်, ကိုယ့်မေတ္တာကိုလဲ.
© Copyright 2019 ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့. နှင့်ဖွဲ့ အားဖြင့် 8celerate စတူဒီယို